Indlu yeholide uYona
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguRomeo
Indlu yeholide uJona ifumaneka kwidolophana encinci entliziyweni ye "Ravni Kotari". Le ndlu ikwifama ye-7000 square metre enendawo yokuqubha enkulu yeendwendwe kuphela kwaye ingqongwe zizidiliya nemithi yeziqhamo eyahlukeneyo iindwendwe ezinayo. Indlu ilungele iholide epheleleyo yamaphupha apho unokufumana uxolo lwengqondo olupheleleyo. Indlu kaJona intsha kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ngomatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba, i-aparat yekofu, igrill, i-air conditioning, i-intanethi ye-wi-fi, i-TV ye-ultra-slim, njl.
Indlu yeeholide uJona ukhululekile kakhulu ukuhlala kwaye uziva ngathi uhlala kwikhaya lakho.
4.87 · Izimvo eziyi-16
Ubumelwane buzolile kwaye bukhululekile kwiholide enkulu. Akukho zihlwele okanye izithuthi zedolophu ezikufutshane nawe ngoko unokuva kuphela iintaka zicula. Ngaphakathi elalini uyakwazi ukubona izilwanyana zasekhaya, ikwalungele abantwana baselalini kuba inebala lokudlala elinezibane zemvula kwaye abanye abantwana banobubele kakhulu kwaye banobuhlobo. Idolophu yaseBenkovac ikwimizuzu emi-5 kuphela ngemoto apho unayo yonke into oyifunayo ngeholide :)
Umbuki zindwendwe ngu- Romeo
Ndinika iindwendwe indawo, kodwa ndifumaneka xa ndiyifuna.